Rajoelina - Ravatomanga : Mpanondrana « bois de rose » -
AccueilRaharaham-pirenenaRajoelina – Ravatomanga : Mpanondrana « bois de rose »
22/09/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Manadio tena mafy amin’ny resaka fanondranana « bois de rose » i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga ary nilaza mihitsy fa niady tamin’izany nandritra ny Tetezamita. Tena nanondrana andramena tokoa i Andry Rajoelina izay tompon’ny fahefana tsy refesi-mandidy…
Namoaka didim-pitondrana laharana 003/2009 tamin’ny 28 Janoary 2009 ny fitondrana Ravalomanana, nanome alalana mpanondrana « bois de rose ». Ny tanjona tamin’izany dia ny tsy hisian’ny fanapahana andramena vaovao intsony, satria tokony ho lany tamin’ity fanondranana ity ireo tahiry efa nisy. Mpanondrana miisa 13 no voakasika tamin’ity didim-pitondrana 003/2009 ny 28 Janoary 2009 ity. Nihazakazaka anefa ny toe-draharaha, ary tsara ny manamarika fa roa andro taorian’ny « Alatsinainy Mainty (26 Janoary 2009) » no nivoahan’io didim-pitondrana io.
Tsy nanafoana na nampitsahatra io didim-pitondrana laharana 003/2009 tamin’ny 28 Janoary 2009 io mihitsy anefa ny fitondrana Andry Rajoelina raha tsy tany amin’ny volana septambra 2009, araka ny didim-pitondrana 38244/2009 tamin’ny 21 septambra 2009, ary tafakatra hatrany amin’ny 23 ny isan’ireo mpanondrana, raha 13 no voakasik’ilay didim-pitondrana. Nihazakazaka mafy nahazo ny hafainganam-pandeha TGV ny fanondranana « bois de rose » nandritra ny enim-bolana, ary an-jatony ny kaontenera tafavoaka teto Madagasikara.
Nahita tetika vaovao nanohizana ny fanondranana « bois de rose » indray anefa i Andry Rajoelina, ka nasaina nandoa 74 Tapitrisa isaka ny kaontenera ireo mpanondrana. Nivoaka indray koa ny didim-pitondrana laharana 38409/2009 ny 5 oktobra 2009, ka tafakatra ampolony maro ireo nahazo alàlana hanao izany.
Rajoelina sy Ravatomanga
Marihina eto fa i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga no tompon’ny fahefana tsy refesi-mandidy teto nandritra ny Tetezamita. Tsy maintsy nandalo sy nahazo ny fankatoavan’izy ireo ny zava-drehetra. Raha fehezina ny resaka dia nampiasa ny fahaizany tanteraka tokoa i Mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina, nilokaloka tao ambadiky ny didim-pitondrana mba nanondranana « bois de rose » tany ivelany.
Porofon’izany ireo kaontenera feno « bois de rose » tratra tatsy Maorisy ny taona 2011. Ny DAF-n’ny orinasa SODIAT teo aloha moa no nisolo vaika ny ankalana tamin’izany, notanana am-ponja ary nomelohin’ny Fitsarana higadra dimy taona.
Free Reverse Phone Lookup dans Ac felis quis tortor malesuada pretium ellente
Fampihavanana ny Malagasy amin’ny taniny : Kara-tany miisa 1 000 no hozaraina ao Tsiroanomandidy
Ny fampihavanana ny Malagasy amin’ny taniny no tanjona hapetraka amin’ny fizarana kara-tany ho an’ny tantsaha nanajary izany, araka ny baikon’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Io no fanamarihana noentin’ny minisitra misahana ny tetikasan’ny Filohan’ny repoblika sy ny ...Tohiny
Hery Vaovao ho an’i Madagasikara : Manamafy hatrany ny fanohanany an-dRajaonarimampianina
Hery Rajaonarimampianina : « Ny fifidianana no hametrahana Fanjakana mafy orina »
Fanondranana vehivavy : Lehilahy iray nampidirina am-ponja
Mbola Rajaonah : Namaly ny antson’ny Bianco
Phone Number Search: Title [...]Every once inside a whilst we pick blogs that we study. Listed beneath are the most recent sites…